म कसरी मेरो पिनरेस्ट खाता मेटाउने वा निस्क्रिय गर्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 457
अधिकांश व्यक्तिहरू Pinterest खाता मेटाउन चाहने प्रक्रियामा जान सक्दछन् वा राम्रो परिणामहरू पाउनको लागि यसलाई निस्क्रिय पार्ने पनि जब यो राम्रो परिणामहरू आउँदछ। हुनसक्छ धेरै मानिसहरूले सोच्नेछन् कि यो किन राम्रो विचार हो एक खाता को निष्क्रियता बढावा।
खाता मेटाउन वा निष्क्रिय गर्न सक्षम हुनु एक उत्कृष्ट सम्भावना हो जसले मानिसहरूलाई सामाजिक मिडियाको सास दिन्छ वा असुविधाको कारण गायब हुन्छ। यो निस्सन्देह डिजिटल समुदायबाट टाढा रहन र उत्तम विचारहरू विकास गर्न जसले हामीलाई शानदार नतीजाहरू दिउँदछन् भन्ने पारदर्शी विचार हो।
यो सम्भव छैन कि ईन्टरनेटमा रहेका सबै परिस्थितिहरू ठीक गर्न र मान्छेले निम्त्याउन सक्ने खराब मुडले थकित महसुस गर्न सक्छ। यद्यपि यो धेरै सम्भव छ कि भित्र पिन्टेरेस्टले अरू सबै गर्छ, तर एकै साथ यो चाखलाग्दो पिनहरू र पोष्टहरूमा हेर्दा तपाईंको समय लिन्छ।
कारण Pinterest अक्षम गर्न
केहि मानिसहरु दावी गर्छन् कि सामाजिक नेटवर्कहरु को लागी उनीहरुको प्रेम सबै सम्भावित चीजहरु भन्दा पर जान्छ। जहाँसम्म, कहिलेकाँही एक राम्रो विचार दिन देखि दिन प्रति दिन एक रोक्नको लागि सक्षम हुनु हो डिजिटल संसारमा के हुन्छ छुट छ।
धेरै चोटि हामी यो बिर्सन्छौं कि डिजिटल युग मात्र त्यस्तै हो, यसले आज activities ०% गतिविधिहरू समेटे पनि, वास्तविक संसारमा के छ भनेर हेर्नको लागि पनि राम्रो छ। साथीहरूसँग कुराकानी गर्न बाहिर जानुहोस्, कार्यहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् जसले प्रयोगकर्ताहरूको लागि अवरोध खडा गर्न सक्छ, रचनात्मक परियोजनाहरू प्रवर्धन गर्न सक्छ, आदि।
तसर्थ, तल तपाईं देख्नुहुनेछ पिनटेरेस्ट खाता निस्क्रिय वा मेटाइएकोको कारणहरू वर्तमानमा।
कहिलेकाँही हामी Pinterest वा कुनै अन्य पृष्ठ विचारहरूको संग्रहालयको रूपमा लिन्छौं, र वास्तवमा प्लेटफर्म भित्र हाम्रो दिन र जीवन बित्दैछ। एक उत्कृष्ट विचार भनेको एक ब्रेक लिनुहोस् र योजना गरिएको समयमा राम्रोसँग न राम्रो भएको सबै कुराको समायोजन गर्नु हो।
खराब योजना बनाइएका विचारहरू
व्यक्तिहरू विश्वास गर्न रुचाउँछन् किनकि कुनै योजना योजना जस्तो भएको छैन, त्यसैले यसलाई प्रयास गरिरहनु नै उत्तम हुन्छ। शायद कहिलेकाँही यो एक उत्कृष्ट विचार हो, तर यो पनि राम्रो छ आराम गर्नुहोस् र एक राम्रो टाउकोले सोच्नुहोस् के हुन्छ, यसका लागि तपाईं खाताहरू अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्न सक्नुहुन्छ।
माथि उल्लेखित कारणहरू दिएर, राम्रो विचार भनेको राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न मानिने चरणहरू अनुसरण गर्नु हो।
तपाईंले तीन-पोइन्ट प्रतिमा क्लिक गर्नुपर्नेछ
"सेटिंग्स" को विकल्प छनौट गर्न आवश्यक छ।
खाता सेटिंग्स प्रविष्ट गर्न समय
ट्याब चयन गर्नुहोस्: "खाता निष्क्रियता"
यी चरणहरू प्रदर्शन गरेको बखत, प्लेटफर्मले तपाईं किन ब्रेक लिनुहुन्छ भनेर स्पष्टीकरणको लागि सोध्नेछ। तपाईं के राख्न सक्नुहुन्छ तपाईं पृष्ठ मा साझा गर्न चाहनुहुन्छ.
अर्कोतर्फ, भनिएको खाता मेटाउन यो सम्भव छ कि तपाईंले माथि उल्लेख गरेको उही चरणहरूमा यो काम गर्नुभयो। तर यो निर्णय गर्न को लागी धेरै महत्वपूर्ण छ र त्यसैले जिम्मेवार गरिनु पर्छ।
1 कारण Pinterest अक्षम गर्न
1.1 समय को आभाब
1.2 खराब योजना बनाइएका विचारहरू
2 म कसरी मेरो Pinterest खाता मेटाउने वा निस्क्रिय गर्ने?